Uhlobo lweSagittarius Kissing: Isikhokelo sendlela abanga ngayo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Uhlobo lweSagittarius Kissing: Isikhokelo sendlela abanga ngayo
I-Sagittarians inokuba nomtsalane kakhulu ngeendlela zabo ezihlekisayo kwaye kwangaxeshanye indlela abanga ngayo ngesitayile. Bayazi apho abantu bekhataza kwaye banokubanga ngenkanuko apho, basebenzise ulwimi lwabo olunamaqhinga ukuze bafumane indlela yokuphendula.
Ngaphezulu koku, baya benomdla kwaye banxanelwe uthando, ukuze baphinde bahlekise, umzuzwana omnye kamva. Aba bemi bendawo bayaziwa njengabonwabisayo kwaye banika esinye isiqingatha sabo.
Sagittarius ukwanga ngamafutshane:
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 7
Abantu be-Sagittarius bayamanga njengabanye kuba beka lonke uthando lwabo ngaphakathi
Abatoli banomdla kwanaxa kufikwa ekuphuzeni kwabo kunye nexesha
Indoda yeSagittarius kufuneka igcinwe ifuna.
Umfazi weSagittarius usenokuba luhlobo olwenza iziqhulo ngelixa usenza.
Ngabo abathanda ngokwenene ukubonelela ngokuzonwabisa. Ngesi sizathu, banikezela ukuncoma kwabo kunye nokuncamisa okuninzi kwabo bakucelileyo, ndingasathethi ke ngokuba luhlobo olulwa namaqabane abo kwaye bamgqume ngokumanga okudlala.
Isitayile sokumanga kweSagittarius
Kunokuthiwa abantu be-Sagittarius bayamanga njengabanye abantu kuba bebeka yonke imizimba yabo ekusebenzeni, kunye nengqondo kunye nentliziyo.
Ngale ndlela, bavala imilebe ngothando lwabo kwaye balahla izibambiso, ukwenzela ukuba ukoneliseka okugqibeleleyo kufumaneke.
Xa utyibilika, aba bantu banomdla babeka iminwe ngeenwele kwaye basanga esinye isiqingatha sabo ngothando oluninzi, ukuze nje udlale kwangaphambili.
Aba bemi ngokuqinisekileyo ngabo bahlekisa abanye ngobunyani babo kunye nemeko yokucamngca kwengqondo.
Ngaphezulu koku, zizenzekelayo kwaye azinaso isingqisho. Bathanda ukugcina iqabane labo lilindile, ke yena uhlala eshiyekile efuna okungakumbi.
Xa bephuzana, banokumangalisa nge-adrenaline ebaleka emzimbeni wabo kwaye ke, ukubetha kwentliziyo yabo.
Kunokuthiwa ii-Sagittarians ziyamanga ngolonwabo, kananjalo ukuba ziyinkanuko xa zizama ukufikelela kwiminqweno yamaqabane abo.
Eyona nto inethemba kuyo yonke imiqondiso yoMlilo, banokuya endle ukuba banamathele kwilifti nomntu abamthandayo.
Ukwanga kwabo kunencasa yolonwabo kuba bekitaza ngolwimi lwabo kwaye bahlala benxibelelana ngokunzulu.
indlela yokudlala ngonomadudwane
Ngaphambi kokujoyina imilebe, benza iziqhulo kwaye bazama ukwenza ukuba umntu abamthandayo abone indlela abahlekisa ngayo. Emva kokuba ukudlala ngothando sele kuphelile, banokuqala ukwanga ngendlela edubulayo.
I-Adventurous, i-Sagittarians nayo iyavuma xa kufikwa kuthando. Ngaphezulu koku, abaze benze iimvakalelo zabo zifumaneke kwaye kufuneka baphuze umntu obancedayo ukuba babenomdla ngakumbi.
Iimpawu ezinokuba nendlela ezintliziyweni zazo ziiAries kunye neAquarius kuba aba bantu banesibindi kwaye kancinci krwada, okuthetha ukuba iSagittarius ivulela ukubanga kwabo.
Abatoli banomdla kwaye bathanda ukwenza ngokungaboni, okunokubonwa kwindlela abanga ngayo. Ngaphezulu koku, banezitayile ezahlukeneyo zokujoyina imilebe, ukusukela nzulu kunye nokucotha ukuya kufutshane kwaye kumnandi.
Iindaba ezimnandi zezokuba zilungile kuyo nantoni na, nto leyo ebenza babenomtsalane ngakumbi. Nokuba bangakanani na indlela abancamisana ngayo, kusafuneka banxibelelane ngokweemvakalelo.
Bayaphila ngazo zonke iintlobo ukwanga
Abantu be-Sagittarius konke malunga nolonwabo kunye nokwenza amaqabane abo onwabe. Abakhathali kakhulu ngeziqu zabo kwaye ngamanye amaxesha banika ukwanga ezidleleni.
yintoni ngoSeptemba 15 uphawu lwe zodiac
Xa kufikwa kwindlela ezihamba ngayo, aba bemi bomhlaba banomtsalane kakhulu kwaye banakho ukonwabisa nabani na.
Bafuna ukumboza amaqabane abo ngokumanga nokumncoma ngaphambi kokuba badlale ngeenxa zonke kuba bathanda ukuhlekisa nokuzonwabisa ngesithandwa sabo.
Xa beqala, bayathandeka kuqala kwaye banika ukwanga okufutshane, ukuze nje babe nothando emva koko. Xa oku kusenzeka, basebenzisa kakhulu umlomo ongezantsi kwaye batyhale isithandwa sabo ebhedini.
Njengokuba kunjalo, ii-Sagittarians zidume ngeendlela ezingcolileyo abanazo, kananjalo ngokuhlala befuna okungakumbi kwiqabane labo, kodwa bangaze balibale ngokuzenzekela.
Bayakuthanda ukuphululwa kwiindawo zabo zemilenze kuba oku kubenza baphambane, kunye nokwabelana ngesondo ngakumbi.
Kananjalo, bazimele kwaye bakhanyisa ithemba, oko kuthetha ukuba bahlala bephuza ngolonwabo. Xa beziva benamandla, bafuna nje ukutsiba ngaphezulu kwamaqabane abo nokumenza azive enamandla abo.
Oku kuthetha ukuba bangabamanga abakhohlakeleyo, kodwa abafani neeScorpios ezilawulayo. Banjengolu hlobo kuba abanako ukuzinceda ngokulula 'ngokuhlasela' amaqabane abo.
Xa bethandana, bafuna ukwanga ngaphambi kwayo nayiphi na into, kwaye uninzi lwamaxesha bafumana oko bakufunayo.
Yanga indoda yeSagittarius
Xa kuziwa kwezothando, amadoda eSagittarius anokuzivala. Bafuna okungalindelekanga kwaye baphile ngendlela eyingozi, ke iqabane labo akufuneki libajonge emehlweni lide lilungele okuthile.
banjani abafazi be-capricorn ebhedini
Indoda yeSagittarius kufuneka igcinwe ifuna. Unako ukuba nomtsalane ngothando lwakhe, kodwa akangoyena mntu ukhetha ukukhetha ukuzibophelela.
Emva kwayo yonke loo nto, uphawu lwakhe nguMtoli, okuthetha ukuba uhlala efuna ukuzingela. Ukuphonononga yeyona nto ayifunayo, kunye nokuba simahla.
Le ndoda inokujonga kuyo yonke indawo ibhinqa eligqibeleleyo, ke inokuba nezithandwa ezininzi zokumonwabisa ngayo yonke imihla edlulayo.
Imvakalelo yakhe yoburharha iyonwabisa, kodwa uyakucaphukela ukungakhathali nohanahaniso. Inenekazi lamaphupha alo kufuneka livumba ngokungathethekiyo ngenxa yokuba libuthathaka kakhulu xa kufikwa kumba wevumba, singasathethi ke ngokuthanda incasa yesitrasi.
Ukusuka kumava abo, banokuba ngabathandi abaphambili kuba abantu basetyhini bayamthanda ngokunyaniseka nangokwenza uthando ngendlela ekrelekrele.
Kwigumbi lokulala, indoda yeSagittarius inomdla, iyonwabile kwaye iyavuya. Ukubona ukuba uhlala ekhuthele, yeyona nto ahambelana kakhulu nayo neminye imiqondiso yoMlilo, kunye nomoya wengqondo.
Akayi kuhamba kakuhle nolawulo lwamanzi noMhlaba kuba ezi zinokuphela zingasenamandla kuye.
Abo bafuna ukuba kunye neSagittarius kufuneka bajonge kwizinto ezenza bomelele kunye nobomi babo boluntu. Kananjalo, akufuneki bazame ukutshabalalisa amaphupha amaqabane abo.
Ukuphuza umfazi weSagittarius
Kuba abantu beSagittarius abathathi ukwanga ngokungathí sina, kutheni le nto lo mfazi kulo mqondiso. Akafuni ukumosha ulonwabo analo ngento enzulu njengokuncamisa kuba uyonwabisa kwaye unethemba.
Umqondiso weZodiac ka-Epreli 8
Ngesi sizathu, usenokuba luhlobo olwenza iziqhulo xa usenza, kodwa ikwangulowo ungazange wohlulwe kukumanga kokuqala.
Le ntombazana ifuna ezothando ezikhululekileyo, nayo ukuba wonwabe kakhulu. Nangona kunjalo, akathandi abantu abangenanto kunye nobuxoki. Okukhona umntu efuna izinto ngakumbi, kokukhona efuna ukubambelela ngokuqinileyo kubo, ngothando.
Ukuba uthandweni, umfazi weSagittarius unamandla kwaye uyonwaba ngakumbi, ukhupha amandla kwaye wonwabile.
Ngaphezu koku, uya esiba nothando, isimo esivuyisayo kunye nendlela yokufumana ulwazi ngakumbi. Uthanda amadoda akrelekrele, ke xa efumana umntu ofanelekileyo ngeetalente zakhe, ujonge ukwabelana nolonwabo lwakhe ukuze amngenise ebhedini yakhe.
Akafuni kuhlala ixesha elide endaweni enye kuphela kuba kufuneka aphonononge kwaye abe nonxibelelwano olusondeleyo kunayo nayiphi na eminye imiqondiso yeenkwenkwezi. Ucinga ukuba ezothando ezintsha zingamfundisa izinto ezininzi, nokuba uyonzakala okanye hayi. Ukongeza, akazukuncamisa kwaye axelele.
Izinto eziphambili ezili-9 zokwazi ngaphambi kokuDibana neSagittarius
Iimpawu zoBudlelwane beSagittarius kunye neeNgcebiso zothando
Uhlobo lweSagittarius lokudlala ngothando: Bold kunye neMboniso
Umdlalo weSagittarius oBalaseleyo: Ngowuphi Abahambelana kakhulu naye?
Umona weSagittarius: Into ekufuneka uyazi
NgoFebruwari 18 Imihla yokuzalwa
I-Pisces ngoDisemba 2020 yeHososcope yenyanga
uyibuyisa njani indoda yakho yeesari
Indoda ye-aquarius scorpio mfazi ubuhlobo
ngomatshi 23 ukuhambelana kweempawu zodiac
umfazi onomhlaza utsala njani umntu wescorpio
nguwuphi umqondiso ngoNovemba 18
ukuhambelana kweempawu zomlilo kunye namanzi
Leo indoda kwaye pisces umtshato womfazi